khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal प्रधानमन्त्री ओली पनि संसद् पुनर्स्थापनानै चान्छन ! – khabarmuluk.com
प्रधानमन्त्री ओली पनि संसद् पुनर्स्थापनानै चान्छन !
पाँच, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने संसद विघटन भएको र चुनाव निश्चित नभएको यो अवस्थामा सडकमा अनेकथरी नारा लाग्न थालेका छन् । सडकमा मात्र होइन, कोठाभित्र पनि धेरैथरी रणनीतिहरु बन्दै छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने आवाज सडकमा आएका छन् । नागरिक आन्दोलनका नाममा यो संविधानै खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने नारा सडकमा लाग्न थालेका छन् । विप्लव र वैद्यहरु मोर्चा बनाउँदै छन् । यसले मुलुक अर्को मुठभेड र द्वन्द्वतिर अग्रसर हुँदै छ । के ओली यो सब अवगाल बोक्न तयार छन् त रु पक्कै पनि छैनन् । यसको तत्कालको उपचार भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हो ।